Fitaovana borosy fandroana fandroana mikraoba
Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana indroa ho an'ny trano fandroana indroa / WOWOW Faucet fandroana afovoan'ny Centerset miaraka amina fivoriamben'ny rano pop-up
Faucet efitra fandroana an'ny efitra fandroana Centerset miaraka amin'ny Fivoriam-bolo amin'ny Pop-Up
naoty 4.85 avy tany 5 mifototra amin'ny 26 mpanjifa naoty
(26 mpanjifa famerenana)
antsipirihany faucheet centreset:
4-in Center toerana bracket
Fivoriana solika vy
ADA mifehy ny biraon'ny ADA mora ampiasaina
Tafiditra ny tsangam-bato
2321400 torolàlana fametrahana
Ny faucet amin'ny fandroana ho an'ny sink amin'ny sambo 2320400 dia tsy hiteraka olana mijanona mihitsy.
Namboarina vita tamin'ny famaranana, ny faritry ny efitrano fandroana ho an'ny filentanan'ny sambo dia tsy mahazo oxidization mihitsy.
Fanangonana ny fantsom-panafihana Push & Seal Pop-up nohavaozina sy fantsom-pizarana faucet cUPC misy lisitra.
Ny arc spike avo dia manome fanadiovana bebe kokoa ary fidirana malalaka kokoa ao anaty rano milentika.
3-hole bracket misy fandaharana afovoan'ny 4-inch ho an'ny fametrahana tsotra. Hole habe: 30-36mm; Fahalemem-panahy ambony: 30mm.
Faharoa azo amboarina ho an'ny fikarakarana mikoriana sy ny mari-pana tsotra.
Ny fanamboarana materiale voakaly dia nanosihosy ny nikela vita maharitra sy azo itokisana.
SKU: 2321400 Sokajy: Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana, Faucets fandroana indroa ho an'ny trano fandroana indroa Tags: 2 Fehifehy, 4 santimetatra, Nickel nopotehina
12.17 X 8.78 X 3.07 santimetatra
Rano mangatsiaka / mafana
Fitaovana fandroana / fivoahana ny tatatra
26 mandinika ny Faucet efitra fandroana an'ny efitra fandroana Centerset miaraka amin'ny Fivoriam-bolo amin'ny Pop-Up
Voalohany, 80 taona aho fa tsy mpantsaka. Ny ampahany sarotra indrindra tamin'ny tetik'asa dia ny fanalana ireo fantsona taloha. Ireo faucet vaovao WOWOW dia kalitao tsara, vidiny tena tsara, manintona tokoa, ary tafiditra ao anatin'izay rehetra ilaina amin'ny asa izay mahatonga ny asa ho tena mora amin'ny DIY. Hanoro hevitra an'ity vokatra ity aho.
Toa tsara amin'ny vidin'ny vidiny. Enga anie ka tsy tazana ny anaran'ny marika, nefa tsy dia fifanarahana lehibe loatra izany. Ny nikela borosy dia mifanitsy amin'ireo accessories nikela borosy hafa ananako. Tsotra ny fametrahana ary nampidirina ny faritra rehetra.
*** E E2020-05-06
Mametraka mahitsy. Mivezivezy tena tsara ny tahony, tena tsara tarehy. Ny fahazoan-dàlana fanampiny noho ny andohalambo avo kokoa amin'ny faucet, ahafahana manana efitrano kely kokoa hanaovana zavatra ao anaty fitoeram-pandeha (lamba fanasan-tanana, fanasana borosy nify, sns) tsy tafiditra ao anaty faucet, izay tiako indrindra; midika hoe tsy dia misy zavatra miditra mifandray amin'ny toerana hivoahan'ny rano, ka vokatra madio kokoa.
Nanao fanandramana be dia be tamin'ny faucet tamina magazay fanatsarana trano vitsivitsy aho ary tokony holazaiko fa ity faucet ity dia toa namboarina tsara kokoa noho ireo lafo be. Gaga aho. Somary mavesatra izy io ary misokatra tsara ny valves ary mikatona miaraka amin'ny fahatsapana mahafinaritra ihany koa. Mahagaga ahy hatreto. Hividy andiany vitsivitsy amin'ireo aho ato ho ato.
B *** h2020-05-20
fauxet, tsara tarehy, vita faucet tsara. Tena mora ny nametraka ary nanana torolàlana aza raha sendra ilainao izany. Vonona ny hanafatra misimisy kokoa aho hanoloana ireo faucet fandroana hafa ao an-tranoko. Tena mendrika ny vidiny. Toa ireo faucet lafo vidy nefa mora vidy kokoa nefa tsy nahafoy ny fanamboarana faucet izy ireo.
Z *** f2020-05-24
Toa tsara ilay faucet. Hanafatra iray hafa ho an'ny fandroako hafa aho. Araka ny nolazaiko, tiako ny faucet ary miaraka amina tatatra vaovao aho izao, omeko an-kafaliana ity vokatra FIVE Stars ity.
L M ***2020-05-29
Rehefa avy namaky hevitra sy nampitaha ny marika izahay dia nividy ity efitrano fandroana ity hisolo ny taloha. Tena mora ny nametraka sy ny famolavolana tsotra indrindra ka mora foana ny madio. Izahay dia nividy volafotsy voadio ity endrika ity dia toa tsara ao amin'ny trano fidiantsika.
Vao haingana izahay no nividy trano ary nila nanolo ireo faucet. Novidiko ity ary mety tsara. Tonga niaraka tamin'izay nilaiko rehetra. Mora apetraka ary toa malama be.
Tsy haiko izay holazaina… fa tiako ity faucet ity! Ity famerenana ity dia ho an'ny laharana faha-3 amin'ireo. Nividy ilay voalohany aho herintaona lasa izay ary mbola matanjaka sy matanjaka izy io ary miaraka amin'ireo ankizy ao an-trano izany! Tena nitazona tsara izany ka nividy faharoa aho. Hanana zavatra hafa amin'ny fandroana fandroana master aho, saingy satria tsara be tamiko ity faucet ity, ary toa lafo izany, dia nieritreritra aho hoe avelao aho hiaraka aminy! Ary faly aho fa nanao izany. Raha nilentika faha-1 aho dia hovidiko indray!
Ny fandefasana haingana sy ireo singa dia niasa lavorary. Izy ireo dia fanatsarana tsara ho an'ny lever tokana 20 yr, faucets plastika. Ny shutoff dia mafy orina ary tsy mitete na inona na inona. Ho an'ny vidiny, tsy hitako izay mety hahavery ny fividianana ireo faucets ireo.
*** W Y2020-06-13
Faly be aho tamin'ny fividianana ity faucet fandroana ity. Ny kalitao dia tsara. Tena mora ny nametraka ary nahitana ny faritra rehetra ilainao hanaovana ilay asa. Toa tena tsara sy mifanentana tsara amin'ireo fitaovana nikela borosy rehetra tao an-trano fidiako. Tsy misalasala aho fa haharitra an-taonany maro ity faucet ity.
Fantsona fandroana kely sy miasa.
Mifanentana tanteraka amin'ity zava-poana ity.
Ara-bakiteny dia ny tananao sy ny maoderina azo ovaina fotsiny no ilainao. Tsy ilaina velively ny «putty» sy «tape» ho an'ny mpantsaka, tsy misy fivoahana na inona na inona. toa kanto sy tsara tarehy izy io.
Faucet tsara tarehy, bika tsara. Te-hisaraka mitokana ho an'ny mafana / hatsiaka satria tsy azoko antoka ny tantana tokana tsy tafaporitsaka. Tamin'ity fomba ity dia azoko antoka fa voaro tsara ny lafiny roa. (mampiasa fantsona fantsona mazava ho azy) Fametrahana mora. Miasa tanteraka. Mihodina toy ny tsio-drivotra ny tahony. Ampifanaraho amin'ny lafatra tsara ny filentehako. Ary nomena vidiny mendrika izy ireo. Nividy roa aho.
Tena tsara izahay nividy roa, iray isaky ny trano fidiovana. Manja. Mijery tsara. Tiako ny hahavon'ny faucet hamenoana ny hamandoantsika.
Faucet tsara ity amin'ny vidiny mirary! Naharitra 30 minitra ny raiko vao nanao faucet 2. Nanafatra ny ampahatelony ho an'ny fandroana vahiny izahay ary mbola miandry am-pitaintainana ny vadiko hisolo azy. Tsy mbola nanana olana izahay hatreto. Tiako ny pop up drain!
Ireo dia toa tsara tarehy ary tsara ny vidiny. Novako daholo ireo nilentika tao amin'ny fandroako niaraka tamin'ireo (8 total). Toa tena tsara izany ary ny fametrahana dia mahitsy ho an'ny tovolahy toa ahy izay nanao ny fantson-drano voalohany. Izy io dia miaraka amina mpampijanona mendrika izay nickel ihany koa ary tsara ny kalitaon'ny fantsona.
Ity faucet ity dia tena tsara. Namboarina tsara, mora apetraka ary miasa tsara. Ny famolavolana pop-drain dia mora kokoa ny mametraka noho ny tatatra taloha. Haka vitsivitsy kokoa aho mandritra ny trano.
Mora apetraka. Toa tsara izany. Tsy misy zavatra mahafinaritra fa toa malama. Mora ampiasaina.
Nividy ity faucet ity ho an'ny trano hofanay ary nasain'ny zanako nametraka azy. Tsy mbola nanao fametahana faucet izy fa hitany fa mora sy haingana be. Ary toa tsara izany.
Ireo no faucet mahafinaritra ary tena vidiny. Tsy zava-maniry loatra izy ireo fa tena sanda tsara raha toa manandrana manatsara ny fandroana fidianao ianao. Tsy dia mafy ny nametraka ary toa maharitra sy miasa tena tsara
Nividy an'ity eritreritra ity aho fa hahazo izay naloako, ho an'ny trano fandroana fanampiny. Nahazo mihoatra lavitra noho ny naloako aho. raha ny marina dia mitovy sy mahatsapa ny itovizany amin'ilay marika marika lafo vidy novidiako ho an'ny efitra fandroana lehibe izy io. faly be. dia hividy indray, raha ny kalitao tsy maintsy atao mandritra ny fotoana maharitra, raha tsy hoe mila zavatra hafa aho.
*** O R2020-07-12
Na eo aza ny vidiny mirary dia mihoatra ny andrasako ity vokatra ity. Mora be ny mametraka azy ary miasa ary toa tsara.
Nosoloinay ireo faucet rehetra tao amin'ny trano fidiovanay. Mora apetraka-mora kokoa noho ilay voalohany novidianay tamin'ny magazay fivarotana fitaovana eto an-toerana! Haavo tsara ho an'ny faucet fandroana trano fidiovana koa.
T *** f2020-07-15
Ny vadiko dia nametraka ireo somary haingana ireo, ny tena sarotra dia ny nanala ireo taloha. Tsara sy metaly mavesatra izy ireo, tsara ny loko. Kely kely ny tahony, fa ny hahavon'ny faucet no mahavita azy. Izy ireo dia mety amin'ny fahafahanao manasa ny tarehinao ao anaty labozia nefa tsy mila mametraka ny tavanao ao anaty fitoerany. Nividy iray ho an'ny efitrano fidiovanay zanakalahy izahay, tianay be dia be izahay nividy roa ho an'ny tompontsika.
Ity dia vokatra vita tena tsara, tsy matetika no averiko jerena fa niavaka ity vokatra ity satria nisy fantsona mahery vaventy nandeha namonjy fantsona. Tsy nampoizina izany ary nankasitrahana tokoa. mora ny nametraka azy ary tsy namoaka.